KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Xhosa Zulu
Yehowa Adansefo, nsɛmma nhoma yi akyerɛwfo nni afã biara wɔ amanyɔsɛm mu. (Yohane 17:16; 18:36) Enti bere a asɛm a edi so yi ka ɔman basabasayɛ pɔtẽẽ bi a esii ho asɛm no, ɛmpene nea ɔman bi yɛ so nsen ɔman foforo anaa ennyina amanyɔsɛm biara akyi.
WƆ December 17, 2010 no, Mohamed Bouazizi antumi anhyɛ ne ho so bio. Na aberante a wadi mfe 26 yi tɔn ade wɔ kwan ho wɔ Tunisia, na na adwuma pa a onnya nyɛ no ama wahaw paa. Afei nso na onim sɛnea aban mpanyimfo binom gyigye adanmude no. Saa da no anɔpa, polisifo bi bɛsesaw Mohamed paya, kwadu ne aprɛ a ɔtɔn no. Bere a wɔyɛe sɛ wɔrefa nsenia a ɔde kari ne nneɛma no, wampene, na nnipa a atwa ahyia wɔ hɔ saa bere no binom dii adanse sɛ polisini ɔbea bi bɔɔ n’asom.
Mohamed tee nka sɛ wɔagu n’anim ase ma enti ɔde abufuw kɔɔ aban ɔfese a ɛbɛn hɔ kɔbɔɔ n’amanneɛ nanso obiara amfa n’asɛm no anyɛ hwee. Wɔkyerɛ sɛ, ogyinaa ɔfese no anim hɔ ara teɛɛm sɛ, “Mɛyɛ dɛn ahwɛ m’abusua?” Mohamed de pɛtro guu ne ho nyinaa na ɔpaa mankyese too ne ho mu. Ɔhyehyewee ma nnawɔtwe abiɛsa akyi no, owui.
Ahometesɛm a Mohamed Bouazizi faa mu no haw nkurɔfo a wɔwɔ Tunisia ne mmeae afoforo. Wɔkyerɛ a, ɛno na ɛde atuatew a ɛma wotuu aban a na edi ɔman no so gui no, na ɛtrɛw kɔɔ Arab aman afoforo so. Europa Mmarahyɛ Bagua no bɔɔ Bouazizi ne nnipa afoforo baanan aba so sɛ wɔako apere wɔn ahofadi (2011 Sakharov Prize for Freedom of Thought). Na The Times atesɛm krataa a ɛwɔ London no nso bɔɔ n’aba so sɛ onipa a ɔyɛɛ ade sen biara wɔ afe 2011 mu.
Sɛnea nhwɛso yi kyerɛ no, atuatew tumi de nsakrae ba. Nanso dɛn na ɛma nkurɔfo tew atua nnansa yi? So biribi foforo wɔ hɔ a anka wobetumi ayɛ?
Dɛn Nti na Atuatew Redɔɔso Saa?
Nneɛma a etumi ma atuatew ba no bi na edidi so yi:
Bere a nkurɔfo ani nnye asetenam nhyehyɛe ahorow ho. Sɛ nkurɔfo nya nea wɔpɛ fi aban no hɔ na wɔn sikasɛm nso ye a, wɔntaa ntew atua—wɔnam nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ no so di wɔn haw ahorow ho dwuma. Nanso sɛ nkurɔfo te nka sɛ kɛtɛasehyɛ ne atɛnkyea rekɔ so, na nnipa kakraa bi pɛ na nneɛma kɔ yiye ma wɔn a, etumi de basabasayɛ ba.
Nea ɛkɔfa ba. Mpɛn pii no, asɛm bi na ɛkanyan nkurɔfo ma wɔyɛ biribi. Sɛ́ anka wɔbɛyɛ dinn no, wogye tom sɛ ɛsɛ sɛ wɔkeka wɔn ho. Sɛ nhwɛso no, Mohamed Bouazizi asɛm no na ɛmaa basabasayɛ kɛse sɔree wɔ Tunisia. Wɔ India no, obi a odi amanyɔsɛm mu akoten a wɔfrɛ no Anna Hazare fii ase kyen kɔm esiane nyansakorɔn a na ɛrekɔ so no nti. Eyi maa n’akyidifo tew sii mmɔnten so tew atua wɔ nkurow 450 mu.
Sɛnea Bible aka bere tenten ni no, yɛte wiase bi a “nnipa binom wɔ tumi na afoforo nso hyɛ wɔn ase a wɔrehu amane.” (Ɔsɛnkafo 8:9, Good News Translation) Ɛnnɛ, kɛtɛasehyɛ ne atɛnkyea abu so sen saa bere no. Nokwarem no, nkurɔfo abehu sɛnea amammui ne sikasɛm nhyehyɛe adi wɔn huammɔ kɛse no nnɛ. Abɛɛfo fon, Intanɛt, ne nsɛm ho dawuru a wɔbɔ wɔ radio ne TV so da mũ nyinaa no ma nsɛm a esisi wɔ akyirikyiri no tumi trɛw ntɛmntɛm kɔ baabiara.
Dɛn na atuatew atumi adi ho dwuma?
Wɔn a wɔtaa atuatew akyi no ka sɛ atumi aboa wɔ akwan a edidi so yi so:
Ɛma ahiafo nya ahotɔ. Bere a ɔdan hane ho asɛm kɔfaa basabasayɛ bae wɔ Sikasɛm mu Ahokyere bere mu wɔ Chicago, Illinois, U.S.A., wɔ 1930 mfe no mu no, aban mpanyimfo gyaee nkurɔfo a wotutu wɔn fi wɔn adan mu no, na wɔmaa wɔn a wɔreyɛ basabasa no mu binom adwuma yɛe. Basabasayɛ a ɛte saa ara a ɛkɔɔ so wɔ New York City no maa mmusua 77,000 a wɔatu wɔn afi wɔn afie mu no san kɔtenaa wɔn afie.
Ɛma wobu atɛntrenee. Esiane sɛ ɔmanfo sii gyinae sɛ wɔremforo aban bɔs wɔ Montgomery, Alabama, U.S.A., wɔ 1955/1956 mfe no mu nti, wɔsesaa mmara a na ɛma aborɔfo tena wɔn afã na abibifo nso tena wɔn afã wɔ bɔs mu no.
Wogyaee afiri bi hyehyɛ. Wɔ December 2011 mu no, nnipa mpempem pii sɔre tiaa afiri bi a wɔde gyabiriw sɔ a na wɔrehyehyɛ wɔ Hong Kong. Wɔkae sɛ ɛde efĩ bɛba, enti wogyaee hyehyɛ.
Ɛwom sɛ wɔn a wɔtew atua no betumi anya nea wɔhwehwɛ de, nanso Onyankopɔn Ahenni betumi ayɛ nea ɛsen saa
Nokwarem no, ɛnyɛ bere nyinaa na wɔn a wɔtew atua no nsa ka nea wɔrehwehwɛ. Sɛ nhwɛso no, sɛ anka atumfoɔ no bɛyɛ ɔmanfo no apɛde ama wɔn no, wɔtwe wɔn aso mmom. Nnansa yi ara, ɔmampanyin bi a ɔwɔ Mediterranea Apuei fam ɔman biako mu ka faa atuatewfo kuw bi ho sɛ: “Ɛsɛ sɛ yɛma yɛn nsa yɛ den wɔ wɔn so,” na nnipa pii hweree wɔn nkwa wɔ saa atuatew no mu.
Sɛ atuatewfo nsa ka nea wɔrehwehwɛ mpo a, akyiri yi ɛde ɔhaw pii na ɛba. Ɔbarima bi a ɔboa ma wotuu Afrika mampanyin bi fii ade so no kaa tumidi foforo no ho asɛm kyerɛɛ Time nsɛmma nhoma no sɛ: “Ɛte sɛ nea yɛafi nsu mu akɔtɔ ogya mu.”
Ɔkwampa bi wɔ hɔ a yebetumi afa so?
Nnipa atitiriw pii susuw sɛ ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔsɔre tia tumidi biara a ɛhyɛ nnipa so. Sɛ nhwɛso no, kan Czech mampanyin Václav Havel a wafi mu a wɔde no too afiase mfe pii esiane sɛ ɔperee nnipa ahofadi nti no kyerɛwee wɔ afe 1985 mu sɛ: “Otuatewfo nni hwee koraa no, obetumi de ne honam abɔ afɔre—na esiane sɛ onni ɔkwan foforo biara a ɔbɛfa so ama afoforo ate no ase nti na ɔyɛ saa.”
Havel nsɛm no ma yɛte nea Mohamed Bouazizi ne afoforo yɛe no ase. Wɔ Asia ɔman biako mu no, nnipa pii rehyew wɔn ho nnansa yi de akyerɛ sɛ wɔn ani nnye nyamesom ne amammui nhyɛso ahorow ho. Ɔbarima bi rekyerɛ nea nti a wɔyɛ ade ma ɛkɔ akyiri saa mu no, ɔka kyerɛɛ Newsweek nsɛmma nhoma sɛ: “Yenni atuo. Yɛmpɛ sɛ yepira nnipa afoforo. Dɛn bio na nnipa betumi ayɛ?”
Bible no ma yenya atɛnkyea, kɛtɛasehyɛ ne nhyɛso ano aduru. Ɛka nniso bi a Onyankopɔn de asi hɔ wɔ ɔsoro ho asɛm, na ɛkyerɛ sɛ ɛbɛba abesi amammui ne sikasɛm nhyehyɛe a adi adesamma huammɔ ma enti wɔtew atua no ananmu. Nkɔmhyɛ bi a ɛfa nniso yi Sodifo ho no ka sɛ: “Obegye ohiani a osu frɛ no, ne mmɔborɔni ne nea onni boafo nso. Obegye wɔn kra afi nhyɛso ne atirimɔdensɛm mu.”—Dwom 72:12, 14.
Yehowa Adansefo gye di sɛ Onyankopɔn Ahenni no ne adesamma anidaso koro pɛ a ɛbɛma wɔanya asomdwoe wɔ wiase nyinaa. (Mateo 6:9, 10) Ɛno nti, Yehowa Adansefo mfa wɔn ho nhyɛ atuatew mu. So ntease nnim sɛ yɛbɛka sɛ Onyankopɔn Ahenni beyi nea ɛde atuatew ba nyinaa afi hɔ anaa? Wobɛka sɛ saa na ɛte. Nanso nnipa pii anya Onyankopɔn nniso no mu ahotoso. Dɛn nti na wonyɛ mu nhwehwɛmu?